Imfashini yeNtombi epheleleyo 2014
Iimpawu zobuhle akufanele ukuba zisekelwe kwisilinganisi esinqumbileyo, kwaye ukugqiba kwakhona kuwela kwisakhelo sefashoni. Iifashthi zasehlobo zonyaka opheleleyo u-2014 unikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokugqoka iimantombazana ezifuna ukuhlala phezulu ngaphandle kwenani leekhilogram. Iimfashini zemifashini zincoma iindwangu zokuqwalasela, iimpapasho eziphathekayo kunye nemibala, kunye nezicathulo kwipulatifomu .
Ifestile yentsha yeentombi ezipheleleyo ziquka izinto ezifana neengubo zokugqoka ezifana ne-tunic kunye ne-blouse, okufuneka, kufuneka uvumelane, ungaze uphume kwifashoni. Iingubo ezide kunye neebhola ezihla ezantsi ngaphantsi komgca we-hip, ngakumbi ngokugqithiseleyo ukugxininisa inani leentombazana ezinamafutha. Phakathi kwemibala ye-monochrome eyaziwayo, kodwa ngesitayela esithile, kufuneka ukhethe umbala wemibala ye-monochrome, oku kukuvumela ukuba ufihle iimpazamo zalo mfanekiso. Imigca ebonakalayo emihle okanye ediagonal. I-Fashion 2014 yokugqoka iingubo ezipheleleyo ngokunikezelwa ngokuchanekileyo kunye nemigca elula kunye nelula ye-shades emnyama, kunye neengubo ezinokugqithiswa ngokugqithiseleyo, zikhona ngokwenene, njengoko zifihla umthamo ogqithiseleyo kwindawo yesisu.
IiJebethi kunye neebhatyi
Imfashini yabantombazana abasakhula ngokugcwele ikhupha ingqalelo kwizinto ezinqabileyo, kodwa okokuqala kwengubo yembatho, njengebhokisi. Ngefashoni zihlala zihlambuluke iimpawu zeebhatyi kunye neebhattshi ezinezixhobo zokuzibophelela ezinye okanye ezibini. Iinkcukacha ezibonakalayo ezintle ezinjengeenkolishi zesiNgesi, ii-lapels, intamo ene-V, okanye intamo ye-shirt cut. Iimpawu ze-lace, umhlobiso, usebenziso kunye nokugqwetha kusetyenziswa njengento yokubhabisa. Umzekelo webhokisi kunye ne-basque ithandwa kakhulu. Ifashoni yeentombazana ezipheleleyo kwiingubo zinika i- dress-case ehlala efanelekileyo kumfanekiso ngenxa yokungabikho komgca ogqithiseleyo ohlangothini olunqeni kunye nokubonga phambi kobuqu bomntu ngamnye, kwaye konke oku kuzaliswe ngokugqithiseleyo ngeentendelezo eziphezulu.
Umbala wezinwele zaseBurgundy
Izindebe zehlobo e-2014
Ubhontshisi be-Haircut 2017 - kuza kuba yintoni ibhokhwe kunyaka omtsha?
Izambatho ekwindla ka-2015
Amantombazana aseSylishlish's Women's 2014
Izicathulo eziphathekayo - entwasahlobo 2016
Umbala wengubo yoNyaka omtsha 2017
Imibala yemibala 2014
IFashion Fashion 2016
Unyango lwezipikili ekhaya
Ukunyuka komtshato 2014
Iibhokotsi ze-Oatmeal zokulahleka kwesisindo
Iingcali zabesetyhini kwinqanaba
Madonna asele kwaye usekupheleni kokuphazamiseka kwemihlaba
Inkukhu ihamba ngeeshizi
Njani ukuqonda ubuxoki?
I-Embassy yaseMalta e-Ukraine
36 izinto ezingenakwenzekayo kuphela eziziqondayo
Iigusha ezivela kwiintlobo
Iindwangu zokutsalwa kwekwindla
Ihashe kwizandla zaso
Kutheni kuhlanganiswa amaqela ezandla neenyawo?
Neuroma Morton - iimpawu
Indlela yokuzenza ufunde - ukuzisebenzisa kunye neendlela zokukhuthaza
21 inyaniso malunga nabahlobo abakhulu
Ndiyakumnika nini iphasta umntwana?
Remantadine - izibonakaliso zokusetyenziswa
Ukushisa ngamanzi abilayo-uncedo lokuqala